﻿ ​​के तपाईलाई ‘घुर्ने’ समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
​​के तपाईलाई ‘घुर्ने’ समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
​​कतिपय मानिसलाई सुत्ने क्रममा घुर्ने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्यालाई घरेलु उपचारमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । सुरुवाती दिनमा कसैलाई घुर्ने समस्या छ भने तल दिइएको उपाय अपनाएमा उपचार हुने आयुर्वेद चिकित्सकहरूको दावी छ । सँगै सुत्ने व्यक्तिलाई घुर्ने व्यक्तिका कारण अत्यन्तै तनाव लिनुपर्छ । घुर्ने समस्यालाई चिकित्सिकहरूले मुटु रोगसँग सम्बन्धित रहेको बताउने गरेका छन् ।